Iyo nyowani Apple Watch Series 6 inosanganisira iyo U1 chip | Ndinobva mac
Kekutanga nguva yatakataura nezve Apple's U1 chip yaive nekuburitswa kweiyo iPhone 11, chip icho haina kuwanikwa mugore rino rePad Pro kuvandudzwa, asi kana iri nyowani Nhepfenyuro dzeApple 6 iyo yakaunzwa zviri pamutemo zuro masikati (Spanish nguva).
Iyo U1 chip ndeye Ultra-yakafara bhendi system (yakanyanya kujeka kupfuura Bluetooth LE uye neWi-Fi kubatana) iyo inotibvumidza isu tsvaga uye uone chishandiso kwachiri kuiswa. Chip ichi, chinoshanda kunyangwe kana mudziyo wacho usina bhatiri, chinotumira masaini eredhiyo anogona kuzivikanwa nemamwe majaira ane chip chimwe chete.
Nekuda kweichi chip, tinogona kuwana yedu iPhone, ikozvino zvakare Apple Watch Series 6, kana isu takarasa, isu takaikanganwa kana kuti yakabiwa. Kuzivikanwa pamwe nenzvimbo kunoitwa kuburikidza nemamwe madhizaina ane chip chimwe chete, sekutaura kwandakaita mundima yapfuura, asi pasina ivo kuziva chero nguva kuti mudziyo uripi, nekuti ruzivo rwese rwakanyorerwa uye runogamuchirwa chete nemuridzi uyo amutsa nzvimbo.
Panguva Apple iwe hausi kuwana zvakanakisa kubva muchip Iri kutove kushandisa tekinoroji iyi kupa iro rinotungamira basa kuburikidza neAirDrop, saka isu tichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei kuti tibudirire pazviri.
Zvinoshamisira kuti Apple haina kusanganisira iyo U1 chip mune chizvarwa chitsva chePad Pro 2020 (kwete mu iPhone SE 2020 kana), nekuti mikana yainopa inogona kunge yakakura kupfuura edzidziso dzisati dzashandiswa uye izvo zvakare ingangoshanda pamwe neAirTags, Nzvimbo dzeApple mabheacon izvo parizvino zvisati zvaona mwenje kunyangwe paine huwandu hwakawanda hwerunyerekupe hwakataridza kuvhurwa kwavo munaGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo nyowani Apple Watch Series 6 inosanganisira iyo U1 chip
Zvinoenderana webhusaiti yeApple, Apple Watch nhevedzano 6 yaizouya isina adapter yemagetsi